Ingabe izinsizakalo eziphansi ze-SEO zebhizinisi elincane liphephile?
Nakuba "amanani aphansi SEO = ingozi" kunenganekwane kunesitatimende sangempela, amacala we-SEO embi ngamanani aphansi akuvamile. Amabhizinisi amancane angabhekisela kakhulu kule nkinga njengamanje ama-eO agxile ama-ejenti aphansi kakhulu awakhangele wona namabhizinisi angakini kanye nokunikezwa kwazo okuningi umsindo okhangayo kakhulu ezitolo ze-e-sites kanye nezindawo ezizama ukukhuthaza ezinhlakeni ezinokuncintisana kakhulu.
Ukulandela le ntengo ephansi i-SEO inikeza ngokungaziphathi kahle kungaholela kulezi ziphumo:
Isijeziso ngenxa ye-Black Hat SEO. Ama-ejenti amaningi we-SEO aphule ngokucophelela iziqondiso ze-Google ngamagama angukhiye ogaxekile, imibhalo efihliwe, imigwaqo neminye imikhuba emibi ngokuvamile inikeza amanani aphansi ezinsizakalo zabo. Lesi yingxenye yesicupho sabo: bathembisa ukuqinisa ngamandla ngezindleko ezikhangayo nokuletha ukukhuthazwa okuthembisiwe. Inqubomgomo enjalo ibabulethela abaningi abanomnikazi wesayithi abangenalwazi abangaqapheli ukuthi ukukhula kwe-rankings etholakala nge-Black Hat SEO kungokwesikhashana futhi ukugodla okukhulu okungenakugwemeka.
Ukuhlaziya. Ngezinye izikhathi, uthola izinsizakalo eziphansi ze-SEO ezinkampani ezincane noma ezinkampani ezinkulu ezingekho i-Black Hat. Esikhundleni salokho, zilinganiselwe ezinketho zokuphromotha futhi zonke izinyathelo zenziwa iqembu elingenalwazi. Ngakho-ke, ngemuva kokuthi ufeze iphuzu elithile, umkhankaso wakho usanda kufaka lapho njengoba abasebenzisi bakho be-SEO abazi ukuthi bangaphi ukusuka lapha. Futhi bamane bangase bangabi namandla okuqhubeka, njengamanani aphansi = umholo ophansi.
Ikhwalithi ephansi yokuqukethwe. Okuqukethwe kudlala ingxenye enkulu ekusebenzeni kwamagama angukhiye, ukwakha isixhumanisi nokukhula kwesilinganiso sokuguqulwa. Kodwa uma okuqukethwe kwakho kungalungile, okuyingqayizivele noma okuthakazelisayo ukufunda, ukufaka amagama angukhiye kanye nezixhumanisi ngeke kwandise isikhundla sakho. Ngeshwa, ukukopisha okufakwe ezinsizeni eziphansi ze-SEO zebhizinisi ngokungajwayelekile kubonisa ukucwaninga nokuhlela njengethimba elinjalo ngokuvamile kunabalobi abanolwazi. Ngakho-ke, ungalindeli imiphumela emihle kusukela kokuqukethwe okhokhelwe u-10 $.
Lolu lwazi alusho ukuthi kufanele ugweme "okungabizi" futhi "eshibhile" i-SEO kunoma yiliphi izindleko. Okufanele ukwenze, kufanele uqaphele izingozi ezihilelekile lapho ufuna izinsizakalo eziphansi ze-SEO zebhizinisi lakho elincane. I-Affordable ayilinganisani ngaso sonke isikhathi eshibhile, futhi inqubomgomo yezinga lentengo akuyona into efana nayo yokukhwabanisa. Ngenkathi kunezinhlangano ezimbi, ezichitha idumela lamafemu we-SEO, sizokusiza uthole ukuhlukaniswa.
Angabizi ngemali engabizi: yini umehluko?
Kungenzeka ukuthola i-SEO emihle ngenani elifanele ngaphandle kwezinkulungwane eziningi zama-ejensi aphansi. Akudingeki ube yi-SEO guru noma ube nomtshina wamanga. Ucwaningo olunzulu lungaphezu kokwanele.
Bhala uhlu lwama-ejensi we-SEO, enikeza usizo lwezobuchwepheshe oluphansi kakhulu kumabhizinisi amancane ase-intanethi;
Qhathanisa izindleko zabo kanye nobubanzi bezinsizakalo abanikezela ngaleyo ntengo;
Bheka indlela abazithuthukisa yona: uma bethembisa imiphumela esheshayo kanye nokweqa ngokweqile, izithembiso zabo cishe ngeke zibe yinto enhle;
Bona ukuthi wonke ama-ejensi anephothifoliyo. Phuma izinkampani ngaphandle kweyodwa. Bese ufunda amaphrojekthi amafemu asebenza kuwo ukuhlola ubuchwepheshe bawo. Ungaphinda uvakashele amasayithi ama-ejensi enza i-SEO ukuze abone indlela abahamba kahle ngayo ngokumelene nabancintisana nabo.
Xhumana nochwepheshe be-ejensi ngayinye bese ubona uhlobo luni lomqondo abawenzayo, kungakhathaliseki ukuthi banokwethenjelwa futhi banobungane noma bafihlekile, bayamangalisa futhi basheshe bakwenze ukuthenga imikhiqizo yabo. Buza imibuzo eyokwethula ulwazi lwabo lwezinkombandlela ze-Google, inqubo yokukhuthazwa kanye nezindlela ze-SEO. Ingabe bayashesha ukukuthembisa imiphumela ngaphandle kokucela okuningi mayelana nesayithi lakho? Ingabe bagcizelela ngobuningi nemiphumela yesikhashana?
Funda isizinda kanye ne-bio yenkampani. Ngenkathi ama-ejensi abaneminyaka engu-5 abanolwazi angcono, ungasheshi ukukhipha amafemu ama-1-3 ubudala. Izinkampani ezincane ezincane zisekelwe ochwepheshe abaye bebhizinisi iminyaka eyishumi. Leli phuzu kufanele likhulunywe ku-bio yenkampani kanye nebhulogi uma kukhona.
Hlola ukubuyekezwa. Ngokuvamile, zonke izinkampani ezithembekile zibeka ukubuyekezwa kwabo kwisayithi yazo noma zibe ne-akhawunti kumawebusayithi okubukeza ukuvumela abasebenzisi bashiye impendulo bese baphendule kuso. Uma i-ejenti, enikeza ngezinsizakalo eziphansi ze-SEO zebhizinisi elincane le-intanethi liyakugwema ukusebenzisana namazwana, cishe akuphephile ukubhekana.
Namuhla, izinkampani ze-SEO ziza ezinhlobonhlobo ezinkulu futhi zithinta inqubomgomo yazo yentengo ngokuhlukile. Ngakho-ke, kunokuba usheshe uphenduke amaqembu we-SEO, okunikeza izixazululo ezingabizi, yenza ucwaningo lwakho ubone ibhalansi langempela lentengo nekhwalithi Source . Ngezinye izikhathi ungase ulahlekelwe amadili amangazayo!